Minecraft Forge ရဲ့ Mod Loader ကို v1.8 Crack က Universal ဖွင့်တင်
နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » Mod Loader ကို v1.9 Minecraft Crack ဖောက်လုပ်
Mod Loader ကို v1.9 Minecraft Crack ဖောက်လုပ်
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဒီဇင်ဘာလ 6, 2016
Minecraft Crack ကိုသင့် Minecraft တပ်ဆင်ခနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီ mod loader ကိုဖောက်လုပ်. Forge mod loader ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 1.7.10 လွတ်လပ်သော Forge mod loader ကို 1.9 အခြား mods တွေအများကြီးထဲမှာလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း Minecraft အတွက်ကူညီဘို့. Minecraft mod loader ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ mods ရာပေါင်းများစွာ၏ installation အတွက်ကူညီပေးသည်ဖောက်လုပ်အက်ကွဲ. ဒါဟာအစအခြား mods နှင့်သဟဇာတဖြစ်သမျှအချိန် mod အသုံးပြုသူမှာသုံးပြီးကြောင်းသေချာ. mod loader မှဂရပ်ဖစ်တိုးတက်လာခြင်းနှင့် user interface ကိုမှ features တွေထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းရဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဖောက်လုပ်. ထိုသို့ mod ထောက်ခံမဟုတ်ကြောင်းကို detect အကယ်., ထို့နောက်သူကသတိပေးခကျြကိုတပ်လှန့်ပေးသည်. ဖောက်လုပ် mod loader ကို backup လုပ် level.dat အသုံးပြုခံကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်လေယာဉ်ပျက်ကျသည့်အစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်အမှားများမှတဆင့်တူးအချိန်အများကြီးမှအသုံးပြုသူများကိုကယ်တင်နှင့်လည်းမိမိတို့အဘို့အမှုအရာမှထွက်ရှာဖွေရာမှ. ဒါဟာအလွန်စစ်မှန်င် ထိထိရောက်ရောက်အထောက်အကူ software နှင့်သည် အသုံးပြုသူအများအပြား mods install လုပ်သောအခါ. mod loader ကိုဖောက်လုပ် 1.9 အသုံးပြုရလွယ်ကူ interface ကိုအတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာ software ကိုထက်ပို. ထိုသို့ mod ထောက်ခံမဟုတ်ကြောင်းကို detect အကယ်., ထို့နောက်သူကသတိပေးခကျြကိုတပ်လှန့်ပေးသည်. Minecraft Forge ရဲ့ Mod Loader ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျသည့်အစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်အမှားများမှတဆင့်နှင့်လည်းမိမိတို့အဘို့အမှုအရာမှထွက်ရှာဖွေရာမှတူးအချိန်အများကြီးမှအသုံးပြုသူများကိုကယ်တင်. Minecraft Forge ရဲ့ Mod Loader ကိုတစ်ဦးအလွန်စစ်မှန် software နှင့်အသုံးပြုသူများအများအပြား mods install လုပ်ပြီးတဲ့အခါထိထိရောက်ရောက်အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်. mod loader ကိုဖောက်လုပ်အသုံးပြုရလွယ်ကူ interface ကိုအတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာ software ကိုထက်ပို. mod loader ကိုဖောက်လုပ် 1.9 အချိန်အများကြီးမှအသုံးပြုသူများကိုလေယာဉ်ပျက်ကျသည့်အစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်အမှားများမှတဆင့်တူးဖော်ခြင်းနှင့်လည်းမိမိတို့အဘို့အမှုအရာမှထွက်ရှာဖွေမှကယ်တင်. ဒါဟာအလွန်စစ်မှန် software ကိုဖွင့်နှင့်အသုံးပြုသူများကိုအများအပြား mods install လုပ်ပြီးတဲ့အခါထိထိရောက်ရောက်အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်. mod loader ကိုဖောက်လုပ်အသုံးပြုရလွယ်ကူ interface ကိုအတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာ software ကိုထက်ပို.
mod loader ကိုဖောက်လုပ် 1.9 Minecraft နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်မည်သည့် modding ဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. အစအဦး၌, mod loader ကိုဖောက်လုပ် backup လုပ် level.dat သာ SMP mod တင်ဘို့ခွင့်ပြုဒီ mod အသုံးပြုခံကြောင်းတွေ့ရှိ, ယခုမူကားများကြောင့်ကပိုပြီးထိုက်တန်အောင်အများအပြားမွမ်းမံမှုများနှင့် Chang ကယခုသင် mods နှင့်အတူစတင်ရန် too.Before ရေပုံးနဲ့ client ကိုနှစ်ဖက် features, သငျသညျ mods တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနားလည်သေချာအောင်. လည်း, သူတို့ကိုသင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြံပြုချက်ဖတ်ရမယ်.
Mod Loader ကိုဖောက်လုပ် 1.9 အံ့ဖွယ်အင်္ဂါရပ်များအပြီးတွင်ဖြစ်ပါတယ်
အသုံးပြုသူများအ Minecraft အက်ကွဲဖို့ mods ထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြု mod loader ကိုဖောက်လုပ်.
အင်အားစု loader ကို Minecraft ၏အသွင်အပြင်သို့မဟုတ်ဂိမ်းမပြောင်းပါဘူး.
ဖောက်လုပ် loader ကိုခြေရင်းဂိမ်းသူတို့ရဲ့ mods ထည့်သွင်းဖို့ mod ဒီဇိုင်နာတစ် interface ကိုထောက်ပံ့ပေး.
mod ဖောက်လုပ်တာဝန်များကိုအလိုအလျောက်နိုင်စွမ်းရှိ, မဟုတ်ရင်ကစားသမားရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုလိုအပ်.
ဒါ့အပြင်တက်တူးဖို့အသစ်သောသတ္တုရိုင်းများနှင့်သတ္တု add, လျှပ်စစ်မီးတဲ့စနစ်မိတ်ဆက်ပေးနှင့်ပင်တစ်ဦးမာဂုပညာရှိသို့မဟုတ် wizard ကိုဖြစ်ခြင်းပုံတူပွား
Minecraft Forge ရဲ့ mod loader ကို Activate လုပ်ဖို့နည်းလမ်း 1.9
Mod Loader ကိုသင့်ရဲ့ Minecraft တပ်ဆင်ခနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဖောက်လုပ်. ဒီတော့ဒီမှာငါတို့သည်သင်တို့အလွယ်ကူကို download လုပ်ဖို့လမ်းနှင့် activation နည်းလမ်းပေးနေကြတယ်. သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာရတယ်လျှင်, ကိုမှတ်ချက် box ထဲမှာသိပါစေ.
ပဌမ, သင်လိုအပ် Minecraft Forge ရဲ့ mod loader ကိုတည်ဆောက်ကို download လုပ်ပါ.
သင်လိုအပ်သီးခြား version ကိုရွေးဖို့သေချာပါစေ.
ကို 'အောက်က Installer ကို Download လုပ်’ ကဗားရှင်းဖိုင်.
ပြီးတာနဲ့ download လုပ်, အ setup လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန် .jar ဖိုင်ကို double-click.
သငျသညျသုံးရွေးချယ်စရာရလိမ့်မည်, ကို select လုပ်ပါ “ဆာဗာကို Install,” ထို့နောက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ folder တစ်ခုက install လုပ်ဖို့ directory ကိုရှေးခယျြ “…” အောက်ခြေမှာခလုတ်ကို.
OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်လုပ်ပြီး install ပြုမိသောအခါထကြွလာသည်ဟု pop-up အပေါ် OK ကိုနှိပ်ပါကြကုန်အံ့.
ဒါကြောင့်ကိုလက်စသတ်သောအခါ, ဆာဗာဖိုင်တွေ directory ကိုရှာပါ.
အခုဆိုရင်တော့သင့် Multicraft control panel ကိုမှသွားနှင့်ကြည့်ရှုပါ “JAR ဖိုင်” အကွက်.
ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့နာမည်ရိုက်ထည့်ပါ. ယခုဆာဗာ Start.
သငျသညျယခုသင်အကြိုက်ဆုံး mods ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်.
အ mod မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်လျှင်, သင့်ရဲ့ server ကိုကို start up သင့်တယ်.
← Wi-Fi ဟက်ကာများ 2017 PC ကွန်ပျူတာများအတွက် Tomb Raider ဒါကိုတော့ထ →